I-china TCT hole saw, hole hole, iron iron hole saw, cemented carbide drill, UNIKA insimbi engagqwali ingxubevange imboni isaha ifektri abakhiqizi | Boda
I-TCT hole saw, imbobo yokubhoboza, insimbi yensimbi yensimbi, i-cemented carbide drill, i-UNIKA insimbi engagqwali ye-alloy hole saw
I-BOSENDA esezingeni eliphakeme le-TCT hole saw / TCT hole drill esika insimbi njengodaka, ngokusebenza kwayo okubukhali futhi okuqinile futhi okuphezulu kanye nokuvulwa okusheshayo, kuthwala ukumelana okuqinile ekucubunguleni.
Ngobuchwepheshe obuthuthukile, kanye ne-alloy- cutter-head, okuholela ekumelaneni okusika okuncane nokusebenza kahle kokuvula ngesikhathi sokusebenza. Ukugaya isikhungo sokubeka indawo yokuma, ukubeka kahle ngaphambi kokubhola, okuqinisekisa ukunemba, ukushesha nokusebenza kahle ngesikhathi somsebenzi. Ukuthuthukisa ukwakheka kwe-chip ukususwa inkatho ukuqinisekisa ukususwa kwe-chip bushelelezi futhi kuvikele ngempumelelo ukuvimba kwemfucumfucu. Isibambi sonxantathu esingashibiliki, sibambe ngokuqinile ekusebenzeni, hhayi ukushelela kalula, senza ukuphepha nesiqinisekiso esiphakeme ekusebenzeni.
I-TCT eqinisekisiwe yokuvula imbobo ye-carbide ingabhoboza izimbobo kupuleti lensimbi ejwayelekile, ipuleti lensimbi ye-alloy, ipuleti lensimbi engagqwali nensimbi yensimbi. Ukushuba kwepuleti okusika kungu-5mm, futhi onqenqemeni lokusika wenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-tungsten, i-cobalt ne-vanadium alloy. Ingasika zonke izinhlobo zensimbi engafaki, izinsimbi ezimnyama nezingezona izinsimbi, ikakhulukazi ngensimbi ebandayo neyashisayo nensimbi engagqwali.
I-BOSENDA esezingeni eliphezulu ye-TCT Hole Saws ingasetshenziselwa ukubhola kuzinsimbi ezingenazinsimbi, izinsimbi zensimbi, ama-alloys e-aluminium nezinto ezahlukahlukene zensimbi ezingajwayelekile.
Ukucaciswa komkhiqizo kusuka ku-12-200MM, ngokuya ngezinto zokucubungula kanye nemininingwane yomkhiqizo, sicela ukhethe inombolo efanelekile yezinguquko.
Hlola ubuqotho bomgodi wokubhola ngaphambi kokusetshenziswa;
Cindezela indawo engunxantathu lapho ufaka umgodi wokubhola emgodini kagesi;
Gcina ubukhulu bomgodi wokubhola nobuso obusebenzayo lapho usebenza;
Sebenzisa amandla amancane ekuqaleni kokubhola, bese ukhulisa amandla ngokufanele ngemuva kokumiswa;
Lapho usebenza, ukuzungeza akufanele kwehle kakhulu ukugwema ukuthi insimbi ibhajwe;
Lapho i-drill yesikhungo ibhola entweni, akufanelekile ukusebenzisa amandla amaningi kakhulu ukugwema umphetho we-blade;
Lapho kubhola ngokuqhubekayo, kuphakanyiswa ukuthi kusetshenziswe uketshezi lokusika olubandayo.
Langaphambilini I-HSS hole saw, imbobo yensimbi yensimbi, isaha yensimbi yensimbi, izinga eliphakeme le-HSS high speed steel drill bit, insimbi engagqwali imbobo isaha
Olandelayo: Woodworking hole isaha, gypsum board hole saw, PVC plate hole saw, wood hole saw, wood drill, PVS drill
Izindiza uhlobo imbobo isaha, Woodworking imboni isaha, a ...
Diamond ingilazi isaha Ceramic, ingilazi sokuprakthiza, ingilazi hol ...
Granite hole isaha, sintered zemabula imbazo isaha, sto ...
Ngokhuni imbobo isaha, gypsum ibhodi imboni isaha, PV ...
IHSS hole saw, iron hole saw, saw metal hole saw, hi ...
I-42 Bi-Metal Hole ibone ngensimbi yokhuni, How saw, Gy ...